होनहार मेयरको अवसान ! – Mayorkhabar.com
२०१७ नोभेम्बर ६ को कुरा हो । कोलम्बो सहरको होटल हिल्टन खचाखच थियो । दक्षिण एसिया र एसिया प्रसान्त क्षेत्रका करिव १५० सहरहरुको संजाल सिटिनेटको अधिवेशन शुरु भएको थियो । समारोहको उद्घाटन श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्गेले गर्नेवाला थिए । जापानको योकोहामा शहरबाट सिटिनेटको सचिवालय दक्षिण कोरियामा २०१२ मा सरेदेखि राजधानी सउलका मेयर पार्क वोन–सुन संजालको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए । त्यसैले उद्घाटन समारोहको अध्यक्षता गर्न र नयाँ कार्यसमितिको चुनाव गराउन उनि पनि कोलम्बो आइपुगेका थिए । अध्यक्षको रुपमा सबैको केन्द्रविन्दु उनै मेयर पार्क थिए । संजालको प्रमुख कार्यकारी पद महासचिवमा म र भारतीय पुर्व आइ.ए.एस.अफिसर विजय जगन्नाथनको उम्मेदवारी थियो । सिटिनेट नेपालका ११ सदस्य मध्ये कार्यकारी समिति सदस्य चयन गर्न महानगर र नगरपालिकाबाट भर्खरै निर्वाचित मेयरहरुः चिरीबाबु महर्जन, रेनु दाहाल, विजय सरावगि, भिम पराजुलि, मानबहादुर जि.सि., हरिबाहादुर महत, धरानका तत्कालिन मेयर स्व. तारा सुब्वा र उपमेयर मञ्जु भण्डारी, तानसेनका अशोक शाहि लगायतको सहभागिता थियो ।
अग्लो राजनितीक र शारिरीक कदका धनि मेयर पार्क कोलम्बोको हिल्टन होटल स्थित समारोह स्थलमा छिरे । उनि सबै सँग हात मिलाउँदै र कसैकसै सँग छोटो भराकुसारि गर्दै हिँडिरहेका थिए । केहि भिड हटेपछि म पनि उनि नजिकै पुँगे र आफ्नो परिचय दिँदैँ कुनै भुमिका नबाँधि भने– गुड मर्निङ, मेयर पार्क ! आइ निड योर भोट फर सेक्रेटरी जेनरल पोजिसन (महासचिव पदका लागि मलाईको भोटको आवस्यकता छ ।)
उनले आफ्नो दुबै हातले मेरो हात समाउँदै भने– ओह्, यू आर कलानिधि ! उनले बडो सालीन भाषमा भने,–आइ हयाभ टु स्पिक ट्रुथ विथ यु । दिस टाइम वी आर रुटिङ फर विजय । (म तपाइसँग सत्य बोल्नु पर्छ । यसपटकको लागि हामिले विजयको पक्षमा जाने निर्णय गरिसकेका छौं ।
मलाई तत्कालै थाहा भयो अब चुनाव जित्न गाह्रो छ, किनकी राजधानी सउलका मेयरले जसलाई भोट हाल्छन् कोरियाका अन्य मेयरले पनि उनैलाई फलो गर्नेछन् भन्ने मलाई थाहा थियो । त्यसको प्रभाव फिलिपिन्समका नगरहरुमा पनि पर्ने करीव–करिव पक्का थियो ।
तथापी मैले भने– नो प्रब्लम मेयर पार्क ! आइ याम इन्डीड इम्प्रेस्ड बाई योर अनेष्टि याण्ड स्ट्रेटफरवार्ड आन्सर (म तपाँइको निश्चलता र र प्रष्ट जवाफबाट साँच्चै प्रभावित भएँ ।)
मैले त्यसो भन्दा सम्म उनले मेरो आँखामा हेरिरेका थिए र मेरो हात पनि समाइरहेका थिए । त्यसपछि उनले गम्भिरता पुर्वक भने–येट आइ विस यु गुड लक ! (तैपनि म तपाँइलाई शुभकामना दिन्छु ।) त्यसो भन्दा उनको अनुहारमा एक प्रकारको हार्दिकता थियो । मैले पनि उनको हात जोडसँग समाएँर धन्यवादको भाव प्रकट गरेँ ।
सन् २०१३ को कोरियाको राजधानीमा भएको सम्मेलनमै मैले मेयर पार्कलाई भेटेको थिएँ । त्यतिवेला उनि पहिलो पटक सउलका मेयरको रुपमा निर्वाचित जल्दो–बल्दो नेताका रुपमा परिचीत थिए । पारम्परिक नेताका पट्यारलाग्दा भाषण र भ्रष्टाचारबाट आजित कोरियाली जनताले पार्क जस्तो कुनै राजनैतिक पृष्ठभुमि नभएको बरु चिरपरिचित मानव अधिकारबादी वकिललाई ठूलो भोटको अन्तरले जिताएर कोरियाको दोस्रो शक्तिशालि पदमा पु¥याएका थिए । पछि उनि यति सम्म लोकप्रीय भए कि २०१८ मा लगातार तेस्रो पटक एक करोड मानिस बस्ने सउलको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । कोरियाको इतिहासमा यस्तो पहिलो पटक भएको थियो । संसारका प्राय विकसित र ठूला देशहरुमा जस्तै राजधानी सहर सउलका मेयर पार्कलाई कोरियामा २०२२ को आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रवल दावेदारको रुपमा हेरिएको थियो ।
कोरियामा उच्च पदस्त ब्यक्तिहरुको जति छिटो उदय भएको छ त्यति नै छिटो पतन वा अवसान पनि भएको देखिएको छ । सन् २००९ मा कोरियाका राष्ट्रपति रानो मुह्यन आफ्नो कार्यकाल पछि हाँस पालेर बोङ्गा भनिने गृहनगरमा शान्त जिवन विताई रहेका थिए । कार्यकाल सकिएको १८ महिना पछि उनलाई भ्रष्टाचारको आरोपको लाग्यो । उक्त आरोपको पिडा सहन गर्न नसकि उनि घर नजिकैको पहाड चडे र त्यहाको पहरोबाट हामफालेर आत्महत्या गरे । यो घटना यति दुखद र मर्मस्पर्सि थियो कि उनको अन्तिम संस्कारमा सरिक हुन करिव चालिस लाख कोरियन त्यो सानो गाउँ पुगेका थिए ।
सन् २०१७ मा पनि फेरि कोरियाका महिला राष्ट्रपति पार्क गुन हे ठूलो विबादमा परिन् । उनि विरुद्ध केहि नजिकका नातेदारलाई फाइदा पुग्ने काम गर्न छुट दिएको, छोरीको प्रभावमा नितीगत निर्णय लिने र उनको नाममा भ्रष्टाचार भैरहेको जस्ता संगिन आरोप लागेपछि उनि माथि संसद र अदालत दुवैले कारवाहि अघि बढाए । उनको विरोधमा हजारौं कारियालीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिए । मेयर पार्कले जनताको आन्दोलनको पक्षमा खुलेर समर्थन गरे । कार्यकारी राष्ट्रपति विरुद्धका जनताको साथ दिने उनको निर्णय तत्कालिन समयमा चानचुने कुरा थिएन । उनले सत्यको लागि सम्झौता गर्दैनथे भन्ने पनि यस घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्रपतिले सार्वजनिक माफि मागिन् र अनुनय विनय गरिन तर अदालतले उनलाई दोसि ठहर गरिदियो । हाल उनि कारावासको जिवन विताइरहेकि छिन् ।
कोरियामा यस्ता घटनाको श्रृङ्खला लामो भएपनि मेयर पार्कको नियती पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा भने सायदै कसैले सोँचेको थियो । विहिबार एकाएक उनि आफ्ना दिनभरिका बैठकहरुमा खारेज गरि एकाएक मेयरको सरकारी निवासबाट हराए । उनि कता लागे कसैलाई केहि सुँइको भएन । कालो क्याप र पछाडी भिर्ने झोला बोकेर हिडेको दृष्य भने सिसि क्यामेराले कैद गरिसकेको थियो । बेलुका छोरिले पार्क सम्पर्क विहिन भएको खबर प्रहरिलाई दिएपछि ६ सय प्रहरी, अग्नि नियन्त्रक, ड्रोन र कुकुर परिचालन गरियो । सात घण्टा लामो खोजी पछि शुक्रबार मध्यरातमा उनको शव सउलकै बकाक डाँडामा मृत अवस्थामा भेटियो । सिएनएनका अनुसार ब्यक्तिगत गोपनीयताका कारण उनको मृतशरिरको अवस्थाबारे प्रहरीले कुनै अन्य जानकारी दिएको छैन ।
मेयर पार्कको मृत्युको कारण अझै पुर्ण यकिन नभएपनि तेस्रो कार्यकाल सम्म स्वच्छ छविको रुपमा परिचित पार्कलाई आफ्नै पुर्व सेक्रेटरीले यौन हिंसाको आरोपमा अस्ति मात्रै मुद्दा हालेको स्थानीय समाचार पत्रहरुले लेखेका छन् । २०१८ को मि–टू अभियानमा समेत महिलाहरुले शक्तिशाली राजनितीज्ञहरुलाई खुलेर आरोप लगाएको प्रति उनिहरुको आत्मविश्वासको प्रसंशा गरेका पार्क सोहि लान्छना आफूलाई लागेको पीडा सहन नसकि मृत्युको बाटो रोजेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । आफ्नो डेस्कमा उनले लेखेर छाडेका छन्– म सबैसँग माफि माग्न चाहान्छु । मेरो परिवार सँग म सधैँ क्षमा प्रार्थी रहनेछु जसलाई मैले सधैँ दुखः मात्रै दिएँ । कृपया मलाई जलाएर मेरो खरानी मेरा आमा–वुवाको समाधिमा छरिदिनु । अलविदा !
कोरिया हेराल्डका अनुसार मेयर पार्कलाई अन्तिम विदाइ दिन हजारौं मानिसहरु शनिवार र आइतबार सिटीहलमा भाव विभोर भई आइरहेका छन् । भोली उनको सउलमै उनको अन्तेष्टि गरिनेछ । तर कतिपयले भने आफूले गरेको गल्तीको सजाय भोग्नबाट भाग्न उनले मृत्युवरण गरेको भनि सामाजिक संजालमा आलोचना पनि भइरहेको छ । महिलाका लगाएको आरोपबारे सत्य–तथ्य औपचारिक रुपमा सार्वजनिक हुने सम्भावना भने कम छ । किनकी कोरियाको कानुन अनुसार आरोपित ब्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यो मुद्दाको फाइल स्वतः बन्द हुन्छ ।
महिला हिंसा र यौन शोषणका र महिला अधिकारको आजिवन वकालत गर्ने मेयर पार्कको मृत्यु अकल्पनीय रुपमा भयो । जे होस, कोरियाको राष्ट्रपति हुने बलियो सम्भावना भएका एउटा कुशल नेताको अवसान भयो । यहि सत्यलाई आत्मसाद गर्ने प्रयत्न गर्दै कोलम्बोमा मिलाएको उनको हातको तातो स्पर्षको अनुभव अझै गरिरहेको छु ।
(लेखक देवकोटा नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ)
Previous Previous post: बर्दघाटका किसानलाई भूमि कर मिनाहा : मेयर भन्छन्– साउनमा कार्यविधि, भदौसम्म कृषक परिचयपत्र
Next Next post: बाढी पहिरोबाट क्षति व्यहोरेको बाह्रविसे र भोटेकोशीलाई चौताराले पाँचलाख सहयोग गर्ने
हेटौंडाका कोरोना संक्रमितलाई रिद्धि सिद्धिको सहयोग २९ असार २०७७ १४:०९
नगरपालिकाको काम अब ‘शहरको आवाजमा’ २९ असार २०७७ १४:०९
कोरोना संक्रमित मेयर सरावगी निको भए, पछिल्लो जाँच नेगेटिभ २९ असार २०७७ १४:०९
विभेदमा पिल्सिएको मधेशको विकासमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच एकमत आवश्यक : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाम्गादे (भिडियो सहित) २९ असार २०७७ १४:०९
सैनामैनाका १ सय ८८ जनाले पाए लालपुर्जा २९ असार २०७७ १४:०९